Oko Ukwazi Ngaphambi Kokuya
Xa uzisa isithuthi sakho kumthengisi wokulungiswa rhoqo okanye umsebenzi wokulungisa , usenokungaqhelekanga kwinkqubo kunye nokuhamba komsebenzi apho imoto nganye ihamba ngexesha lo msebenzi usenziwa. Kodwa ukuba liSebe elihle, lihamba njengomshini oyile kakuhle ekugqibeleni libuyisele kuwe.
Ngokuqhelekileyo amasebe enkonzo amkele ukuyeka, ngaphandle kweemeko zengxamiseko. Kungenzeka ukuba wabiza isebe lesevisi ukucwangcisa ukuqesha kwakho ngaphambi kwexesha.
Kwimeko yokulondolozwa kwemihla ngemihla, ngaba ukukhanya kweenkonzo kuya kuvela kwi-dash yakho ekukutshintsheleni imfuneko yokufownela, okanye isebe lenkonzo liya kuqhagamshelana nawe ngqo ngefowuni, i-imeyile, okanye i-imeyile rhoqo.
Xa uqala ukudonsa kwi-drive drive yomthengisi, uya kubingiswa ngumcebisi wenkonzo oza kukubonisa nge-oda yokulungisa echaza umsebenzi oza kwenziwa, oqhele ukuquka uqikelelo lweendleko. Emva kokusayina umyalelo, uya kuhamba kwindawo yokulinda kude ude uqedile umsebenzi. Ukuba inkonzo yakho iyakuthatha ngaphezu kweeyure ezimbalwa, umntu ovela kumthengisi uya kukuqhubela ekhaya okanye asebenze (aze akukhethe), okanye baya kukunika imoto-mboleko yokusebenzisa ixesha.
Iindawo ezininzi zokulinda iimpahla zifakwe kwi-sofas eziphathekayo kunye neentonga, amaphephancwadi, kunye nama-televisions agqitywa kwi-newsstand ye-24/7. Abathengisi bee-Upscale nabo baya kuba neesitokhwe zokunqongophala ngokugcwele, banike iikhofi, i-tea, amanzi, ii-cookies kunye neziqhamo.
Ukupapasha i-oda yakho yokulungisa
Umcebisi wakho wenkonzo unesixanduva sokuqinisekisa ukuba umyalelo wakho wokulungisa unikwa umchwepheli, mhlawumbi ngokuwuhambisa ngokuthe ngqo okanye usebenzisa i-dispatcher.
Kwiimeko ezininzi, nokuba wenza uguquko lweoli okanye ulungiso olukhulu lomsebenzi, ochwephesha uya kufuneka awise imiyalelo yomsebenzi.
Ngamanye amaxesha la malungu avela kwisebe lalo malungu, ngamanye amaxesha amalungu athululwa ukusuka kwenye indawo. Ngamanye amaxesha, ngokukodwa xa usuqedqa umsebenzi iiveki ezimbalwa ngaphambi kwexesha, iinxalenye sele zisesekhoyo.
Njengoko uchwepheshe wenza umsebenzi, unokujonga ezinye iingxaki ngemoto okanye kwiimfuno zokugcina eziqhelekileyo ezingabhekiswa kuyo, ngoko ukwenza "ukuthengiswa." Kodwa lo msebenzi awuyi kwenziwa ngaphandle kwemvume yakho. Ngoko lindela ikhwelo evela kumcebisi wakho wenkonzo ukukwazisa oko kufuneka kwenziwe, kutheni, kwaye kuya kuba nexabiso elingakanani. Ukuba ukhetha ukungenzi umsebenzi owongezelelweyo, umcebisi-ntengiso uya kuqaphela kwifayile yakho ukuba waqaphela izimo kwaye ukhetha ukungavumeli nawuphi na umsebenzi, nokuba ngaba kukho nayiphi na imiba yokhuseleko.
Xa umsebenzi usuphelile, imoto yakho iya kuhlamba kwaye yabekwa kwindawo yesigxina phambi komthengisi (ukuba ulinde kwindawo) okanye kwindawo ehamba phambili, apho iya kuhlala khona uze ufike phezulu. Umcebisi wenkonzo ngoku uya kugqibezela ukuhlawula, udibanise nayiphi na izaphulelo, kwaye ujonge ukuba ngaba iindleko zifakwe phantsi kwewaranti, ukuba unembopheleleko yokuhlawula, okanye ukuba ivenkile ihlawula (enokuthi yenzeke njengokwenza okulungileyo kwi- ukulungiswa, umzekelo).
Naliphi na iindleko ze-sublet zomsebenzi owenziwe ngaphandle kwendawo okanye ngekontrakta yangaphandle (ukulungiswa komzimba kunye nepeyinti, ukuhlawulwa kweendleko, njl.) Kuya kuhlawulwa ngeli xesha. Emva kokuba zonke iiflawulo zigqityiwe, umyalelo wokulungisa uprintwa, unikezwe kuwe, kwaye uyayayityina (ukuba umsebenzi ungaphantsi kwewaranti) okanye uhlawule ukulungiswa. Ngalesi sikhathi umncedisi wenkonzo uya kuphinda achaze ukuba yintoni eyenziwe umsebenzi, kutheni kwenziwa, kwaye yintoni enokucetyiswa ngexesha elizayo.
Abacebisi benkonzo elungileyo nenye yeyona ndlela iphambili ye-PR yokuthengisa imoto ingaba nayo, kwaye ininzi yabo isebenza kanzima ukuqinisekisa ukuba uyayiqonda ukulungiswa kwakho, ukuba yenziwa ngexesha elifanelekileyo, nokuba ukuba ingxaki ivela, iqwalaselwa ngokukhawuleza kwaye ukwaneliseka kwakho.
I-Perl String lc () Umsebenzi
I-American Negro Academy: Ukukhuthaza i-Talented Ten
IiRekhodi zeHlabathi zeLizwe elide